Nepal Republic Media Pvt. Ltd.
कहीँ बन्दको रोष, कहीँ खुलेको जोश
Thursday, 05 April 2012 15:58	नागरिक
(7 votes, average 2.00 out of 5)
गजबको विरोधाभास जन्मिएको छ गणतन्त्र नेपालमा। यता काठमाडौँका मदिराप्रेमी ट्राफिक प्रहरीको मापसे आतंकले बिलखबन्दमा परेका छन्। उता, अछामी जनता २५ वर्षपछि प्रतिबन्ध मुक्त मदिराले आफ्नो प्यास मेटाएर रमाउँदै छन्। दुवै तर्फबाट राजस्वको ओइरो लागेको छ।
'म बिचरो लाटो प्रोफेसर'
Thursday, 05 April 2012 15:52	नागरिक
(7 votes, average 4.43 out of 5)
अचेल डा. दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई रिस उठ्न थालेको छ। रिस उठ्दा उहाँका ओठ बुदबुदाउन थाल्छन्। नजिकको मानिससँग केही बोलिरहनुभएको जस्तो। आफैसँग केही भनिरहनुभएको जस्तो। उमेर त खासै भएको छैन। अहिलेसम्म जवान नै देखिनुहुन्छ। शरीर अलिकति थोत्रिए पनि रामरमितामा रमाउन छाडनुभएको छैन। गएको शनिवार नगरकोट पुग्नुभएको थियो, परिवारका सदस्य र मित्रजनसँग।
रायनाको आँखामा चम्केको देश
Thursday, 05 April 2012 15:49	नागरिक
(5 votes, average 3.80 out of 5)
किशोर नेपाल- 'ऊ त्यो हो रामारोशन लेक!'
वरुणका दुवै हात रायनाको घाँटीमा बेरिएका थिए। ऊ आफ्नो औँलाले संकेत गर्दै रायनाको आँखामा टल्काउन खोजी रहेको थियो, अछामको गौरव मानिने रामारोशन लेक। ऊ रामारोशनको विवरण पनि दिँदै थियो क्रिकेट कमेन्ट्रीको शैलीमा। रायनालाई रमाइलो लागेको थियो आफ्नो पितृभूमि अछाम।
Friday, 30 March 2012 18:02	नागरिक
(8 votes, average 2.38 out of 5)
दार्शनिकहरू भन्छन्, 'जीवन भनेको जुवा हो।' भवानी तामाङले ढुकुटी खेल्दाखेल्दै आफ्नो जीवन नै जुवा खेलिन्। अरू कतिले जीवनको जुवा खेल्ने हुन्? यसै भन्न सकिँदैन। श्रीमतीले खेल्ने ढुकुटीका लागि बैंकको ढुकुटीमा डकैती गर्ने एकजना बेपत्ता भएका छन्। त्यस्ता अरू कति होलान्? कसैलाई थाहा छैन। दरिद्र देशहरूमा पैसा नै परमात्मा हुन्छ।
बढ्दै छन् बेरोजगार प्राविधिक
Friday, 30 March 2012 18:00	नागरिक
(12 votes, average 3.58 out of 5)
अनिता शिवाकोटी- उनले गलामा स्टेथेस्कोप भिर्नुपर्ने हो। नामअगाडि ठाँटले डा. झुन्डाउनुपर्ने हो। तर, उनी खासाबाट रेडिमेड सामान ल्याएर महाबौद्धमा व्यापार गरिरहेका छन्। चालिस लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर एमबिबिएसको डिग्री हासिल गरेका यी तराइवासी अहिले बाबुआमालाई अनेक तरहले ढाँट्न बाध्य छन्। उनका बाबुआमा छोरो अस्पतालमा बिरामी जाँचिरहेको हेर्न चाहन्छन्। तर, उनी बेरोजगार छन्।
Friday, 30 March 2012 17:59	नागरिक
किशोर नेपाल- साईघाटबाट उकालो लाग्यो रायनाको जिप। सूर्यको उज्यालो धमिलिन थालिसकेको थियो। रायना चारैतिर नियालेर हेर्दै थिई, कर्नालीको हल्का नागबेली तस्बिर उसको आँखामा ढुंगामा कुँदिएको मूर्तिजस्तै कुँदिन थालेको थियो। प्रकृतिको रोमाञ्चक दृष्यहरूले उसको पूरै शरीर रोमाञ्चित भैरहेको थियो।
Thursday, 22 March 2012 14:22	नागरिक
(9 votes, average 3.22 out of 5)
नेपाली राजनीतिका धुरन्धर खेलाडी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गएको साताभरि विरोधको भूमरीमा जाकिनुभयो। यसपटक उहाँ राजनीतिक कारणले होइन, पुत्र प्रकाशको सगरमाथा आरोहणको उच्च आकांक्षा राखेकाले विरोधमा जाकिनु भएको थियो। प्रचण्डजस्ता सचेत नेताले सरकारसँग पुत्र प्रकाशको आरोहणको उच्च आकांक्षा पूरा गर्न सिफारिश गरेको पत्याउन गाह्रै पर्दछ।
सेक्स स्क्यान्डले डुबे जो
क्या दामी भो सेक्सको कुरा!
सुरु २०६८ : अञ्जु पन्त र दीपक लिम्बू
ज्ञानेन्द्र पथमा बाबुराम
हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सो...
- विकास कार्की
संघीयता र आमाको मृत्यू
गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्...
- फुर्पा तामाङ
बैसाखीविना उभिएका कवि
देव आनन्दको आत्मस्वीकृति
उचाइमा उचाइ थपौँ
किताबको खोल र गुदीका कुरा
यात्रा : जिन्दगी!
नेपाली किताबको अन्तराष्ट्रिय बजार!
हिमालसँग आँखा झिम्क्याउँदै
खोई तिनको देश?
Copyright © 2020 Nepal Republic Media Pvt. Ltd.. All Rights Reserved.